Category: steemit - @mmunited
ဒီအကြောင်းအရာကို @aggamun က ကျွန်တော့်ကို ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ @aggamun ကို credit ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာလဲ ရေးစရာတွေက ရှိနေတော့ ဒီပိုစ့်အကြောင်းကို ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်ဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ internet connectionu ကလဲ မကောင်းတော့ discord ကိုတောင် ဝင်လို့မရ ဖြစ်နေပါတယ်။ Vote ပေး comment ပေးလို့လဲ မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုက လူတိုင်းကို တစ်နေ့ကို vote တစ်ခု ပဲပေးထားပါတယ်။ အချို့တွေက တစ်ရက်ထဲ ကို ပိုစ့်တစ်ခု အရင်တင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်က vote ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ မှ esteem နဲ့ထပ်တင်တယ်။ အဲ့ ဒိအချိန်မှာ ကျွန်တော့် vote က ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်မရတော့ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကို ရှောင်လွှဲဖို့ဆိုရင် esteem နဲ့ပိုစ့်တင်ပြီးမှ ကျန်တဲ့ပိုစ့်ကို တင်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ esteem နဲ့ပိုစ့်တင်တဲ့အခါမှာလဲ esteem နဲ့တင်တဲ့ ပိုစ့် နဲ့ တစ်ရက် တိတိခွာပြီးမှ နောက်ထပ်ပိုစ့်ကို တင်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
@jacekw က သူ english ဘာသာစကား မသုံးတဲ့ community တွေကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အခြား community တွေကို လဲ မေးခွန်းတွေ မေးပြီးပါပြီ။ အခုအလှည့်ကတော့ မြန်မာ community အတွက် အလှည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး မြန်မာ community နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူလေ့လာထားရသလောက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ ကွန်မြူနတီက ပိုစ့် အနေနဲ့ စဉ်ရင် ပိုစ့်ပေါင်း ၂၃၀၀၃ ပိုစ့်နဲ့ နံပါတ် ၁၄ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဆုကြေးရရှိထားမှုမှာတော့ ၂၃၅၀၃ Steem နဲ့ နံပါတ် ၁၅ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ စာရေးသူပေါင်း ၁၅၄၉ ယောက်နဲ့ နံပါတ် ၁၅ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ non-english ကွန်မြူနတီတွေကြားထဲမှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာကတော့ သူမေးထားတဲ့ မေးခွန်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူပြန်ဖြေထားတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့တော့ အဲ့ဒါတွေကိုတော့ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ ဒီအောက်ကပိုစ့်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
1. စာကြောင်းရေ အနည်းငယ်ကိုပဲသုံးပြီး ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် မြန်မာ ကွန်မြူနတီကို ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ။
2. မြန်မာ ပြည်မှာရှိတဲ့ steemit အသုံးပြုသူတွေထဲက ဘယ်သူတွေကတော့ လူသိအများဆုံးလဲ။( တစ်ယောက်ထက်ပိုနိုင်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘယ်သူတွေက လူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှု အခံရဆုံးလဲလို့မေးထားပါတယ်။)
3. ဘယ် Steem ပရောဂျက်ကို မြန်မာ ကွန်မြူနတီက ပြုလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။
4. မြန်မာ ကွန်မြူနတီမှာ witness ရှိလား။ ဘယ်သူလဲ။
5. မြန်မာ ကွန်မြူနတီဟာ ညီညွှတ်စွာနဲ့ ရှိနေသလား။ ဒါမှမဟုတ် အုပ်စုတွေအများကြီး ကွဲနေပါသလား။
6. ဘယ်လို အစပျိုးမှုမျိုး၊ အခြေခံမူနဲ့ သဘောတူညီချက်မျိုးကို မြန်မာ ကွန်မြူနတီအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲ(ဒီနေရာမှာ initiatives ဆိုတာကတော့ Steemit အတွက်ကို အစီအစဉ်တစ်ခုခုကို အစပျိုးခဲ့တာလို့ ဆိုလိုဟန်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် give away တစ်ခုခုကို ဆိုလိုဟန်တူပါတယ်။)
7. မြန်မာ ကွန်မြူနတီအတွက် အကြီးဆုံး ပြဿနာက ဘာလဲ။
8. မြန်မာပြည်မှာ လူကြိုက်အများဆုံး ဟင်းအမည် ကဘာလဲ။
1. How would you describe the #myanmar community inafew sentences?
2. Which #myanmar users are most recognized on Steem?
3. What Steem projects have been created by people from your community?
4. Which witnesses come from the #myanmar community?
5. Does the #myanmar community stick together or is it divided into many groups?
6. What initiatives / principles / conventions have you developed?
7. What are the biggest problems of the #myanmar community?
8. What is the most popular dish from Mjanma? 🙂
ဒီမေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲတော့ မဖြေချင်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လဲ ပါဝင်ဖြေဆိုပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
Ref Link : https://steemit.com/myanmar/@jacekw/meetcommunity-9-hello-myanmar-community-we-are-polish-community-we-would-like-to-know-more-about-you
ကျွန်တော့်ရဲ့ steemit အစပိုင်းခရီးက အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပံ့ပိုးပေးမဲ့သူမရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး @steempress-io ဆီကနေ အကူအညီရယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုဒီပကျော်ရဲ့ msu ကို ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ engagement လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာတဲ့အတွက် msu မှာ ပူးပေါင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့​ဒိအချိန်မှာ မြန်မာ steemit လောကက အကျပိုင်းကို ရောက်နေခဲ့ပြီ။ (ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ပါ) msu လဲပဲ အကျပိုင်းကို ရောက်နေတာပါပဲ။ လူတွေ အတော်များများက စာမရေးကြတော့ပါဘူး။ သူတို့စဉ်းစားတာက ပိုက်ဆံမရရင် စာမရေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အခွင့်အလမ်း တစ်ခုဆိုတာကို မေ့လျှော့နေခဲ့တယ်။ Steemit မှာ လူတွေများနေတဲ့အချိန် တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုစ့်တင်တာ၊ comment ပေးတာ၊ စတာတွေကို လူတွေက သိပ်သတိမထားမိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူနည်းလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုစတင်သတိထားမိလာပါတယ်။ ဒါကတော့ network တစ်ခုကို တည်ဆောက်တာပါပဲ။
အဲ့ဒိနောက်မှာတော့ လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ခံစားလာရပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် @paulag ရဲ့ Redfish Powerup League, @abh12345 ရဲ့ Curation and Engagement Leagues စတာတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော contest အချို့မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆုကြေးသိပ်မရပေမဲ့ engagement အတွက်ကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲအချို့မှာ ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ @pifc ရဲ့ payitforward curation contest, @reonlouw ရဲ့ share your world contest စတာတွေမှာ ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲတွေက လူတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်မသိသေးတာတွေ အများကြီးကိုလဲ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ steemit မှာ တစ်ကယ်ကို တက်ကြွတဲ့သူတွေပါ။ အဲ့ဒိတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုလဲ အလိုလိုတက်ကြွလာစေပါတယ်။
နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုကတော့ @c-squared ရဲ့ discord server ကို curator အနေနဲ့ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ဖတ်သမျှပိုစ့်တွေထဲက ကောင်းတဲ့ပိုစ့် သဘောကျတဲ့ပိုစ့်တွေရင် အဲ့ဒိနေရာကို ပို့ပြီး သူတို့ကို upvote လုပ်ခိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုပဲ မကောင်းတဲ့ပိုစ့် သူများရဲ့စာတွေကို ကူးချထားတာတို့ သူများစာတွေကိုဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်ခါထပ်ခါ ပိုစ့်တင်နေတာတို့ကိုတွေ့ရင် @steemcleaners ကို သတင်းပို့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အကျိုးရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် မြန်မာ တွေကို လဲ အဲ့ဒိလို active ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ English လိုမဖတ်တတ်ရင်တောင်မှ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာတွေကိုတော့ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ C2 discord server မှာ မြန်မာ channel တစ်ခုရထားပါတယ်။ အဲ့ ဒါကို အသုံးချပြီး မြန်မာတွေရေးတဲ့အထဲကနေ ကောင်းမွန်တဲ့ပိုစ့်တွေကို ရွေးချယ်ပြီး upvote ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ @mmcg ဆိုတဲ့အကောင့်ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒိအကောင့်ကနေ complication (ကိုယ် curate လုပ်ထားတဲ့ပိုစ့်တွေကို စုပေါင်းပြီးတော့ ပိုစ့်တစ်ခုရေးတာပါ) လုပ်ထားတဲ့ပိုစ့်တစ်ခုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိပိုစ့်ကနေ ရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို တစ်ယောက်ကို ၂၀ % အထိခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Curator အတွက်ကတော့ ပိုစ့်သုံးခုစလုံးကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့ရင်တော့ 20% အထိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ရတာနည်းနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ပိုစ့်ကို ရွေးချယ်ခံရတဲ့အပြင် ဆုကြေးပါထပ်ရဦးမှာဆိုတော့ စာတွေပိုမိုရေးဖြစ်လာဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ complication ပိုစ့်တွေကို @bobokyaw, @kyawhlaing, @mm7, @pyaesonekhinkhin, @paingheinkyaw စတဲ့ SP များတဲ့သူတွေနဲ့ msc, msu စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလဲ ပံ့ပိုးပေးကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
In this post I start using @steembay for aution. I would like to make aution for Spineback Wolf (gold).
This card price in the market currently is 2.88$. It worth 3.38 steem in current steem price. I would like to start my bid with3steem.
Take advantage of this auction to getacheap card. All you need to do is to be the high bidder.
Aution winner needs to send Steem first.